DR. DUFLE: “10-sano kadib qaraxii qasaaraha badnaa ee Hotel Shamo ma hor istaagin inaan gaarno hadafkeena” – Maanta Online
3-da bishii Disembar Sanadkii 2009 waxaa magaalada Muqdisho ka dhacay qarax ismiidaamin oo uu fuliyay nin suunka walxaha qarxa isku soo xiray, iyadoo maanta oo ay ka soo wareegatay 10-sano waxaa ku geeriyooday dad tiradoodu gaareyso 30-qof kuwaasi oo isugu jira aqoonyahano, arday, waalidiin iyo madax ka tirsan jaamacadda Banaadir.
Goobta uu qaraxa ka dhacay oo ay ka dhaceysay munaasabad ay ku qalin jebinayeen arday dhameysatay maadada caafimaadka ee Jaamacadda Banaadir, ayaa dadkii naftooda ku waayay waxaa ka mid ahaa Wasiiro ka tirsan Dowladdii KMG ahayd ee uu madaxweynaha ka ahaa Shariif Sheekh Axmed taasi oo noqotay dhacdo xanuun badan ku reebtay shacabka Soomaaliyeed ee ku sugan dalka gudihiisa iyo dibadiisa.
Dr. Cusmaan Maxamuud Dufle oo ka tirsan xildhibaanada aqalka sare ee Baarlamaanka Federaalka ah isla markaana ka mid ah xubnaha asaasay jaamacadda Banaadir ayaa ka warbixiyay xaaladdii uu kala kulmay markii uu qaraxa ka dhacay hoolkii ay ku sugnaayeen dhammaanba dadkii ka qeyb galay xafladda qalin jebinta ah.
Xildhibaan Dufle ayaa sheegay in qaraxa markii uu dhacay uu isagu fadhiyay safka hore oo ku dhoweyd memberka ay khudbadaha ka jeedinayeen xubnaha lagu casuumay inay halkaasi ka hadlaan, isagoona sheegay in ilaa 5-arday dhallinyaro ah oo fadhiyay kuraasta safkii uu isagu fadhiyay ay dhammaantood geeriyoodeen.
Waxa uu sheegay in xafladda qalin jebinta ardayda ee isku bedeshay musiibada ay ahayd dufcaddii labaad ee ka baxa jaamacadda Banaadir, isagoona sheegay in sanadguurada 9-aad ee ka soo wareegatay qaraxii Hotel Shamo uu ku soo beegmay xilli maalinimadii doraad ahayd ay dhacday munaasabad ay ku qalib jebiyeen dufcaddii 13-aad oo ka baxay kulliyadaha Injiniyeeriyada, macallimiin iyo taqasusyo kale.
“10-sano kadib qaraxii qasaaraha badnaa ee Hotel Shamo ma hor istaagin inaan gaarno hadafkeena” ayuu yiri Dr. Cusmaan Maxamuud Dufle oo ugu baaqay shacabka Soomaaliyeed inay ku mintidaan sidii ay u gaari lahaayeen hadafkooda horumarineed, isagoona hoosta ka xariiqay in jaamacadda Banaadir ay soo saartay 3,500-aqoonyahano ah oo maanta ka shaqeeya dalka Soomaaliya.
Dr. Dufle ayaa sheegay in dhacdada naxdinta leh ee 9-sano kahor ka dhacday Hotelka Shamo magaalada Muqdisho ay ahayd mid ay ku waayeen aqoonyahano iyo arday waxyaabihii ay barteen ugu adeegi lahaa dalkooda iyo dadkooda.
Xildhibaanka dhaqtarka ah kana tirsan hormuudka jaamacadda Banaadir, wuxuu uga mahad celiyay garab istaagga ay shacabka Soomaaliyeed u muujiyeen madaxda iyo maamulka Jaamacadda Banaadir, isagoona sheegay inay la soo xiriireen jaamacado aan la aqoonin oo ka howlgala dalka dibadiisa kuwaasi oo uga tacsiyadeeyay dhibaatada gaartay.
Qaraxa qasaaraha geystay ee ka dhacay Hotelka Shamo sanadkii 2000 ma sheegan ururka Al-Shabaab, waxaana ninka fuliyay nin ka yimid dalka Holland kaasi oo qol ka kireystay Hotelkaasi kahor inta aan la qaban munaasabadda ay ku qalin jebinayeen arday ka baxday jaamacadda Banaadir.
Waxaa ku geeriyooday qaraxaasi shaqsiyaad ka mid ahaa asaasayaasha Midowgii Maxkamadaha Islaamiga ah ee Muqdisho ka talinayay mudada 6-da bilood ahayd ahaana saaxibada aadka ugu dhowaa Madaxweynihii xilligaasi ee Dowladdii KMG ahayd Shariif Sheekh Axmed oo Maxkamadaha Midoobay guddoomiye ka ahaa.
← Sacuudi Carabiya oo markii ugu horeysay hoggaamineysa dalalka ka tirsan G-20
U.S. Citizen Holds Leadership Role in Somali Terror Group, Prosecutors Say →